ह्याट्रिक पूरा गर्ने‍ अवसर हुँदा एमबाप्पेले पेनाल्टी प्रहार गर्न किन दिए मेस्सीलाई? - ramechhapkhabar.com
ह्याट्रिक पूरा गर्ने‍ अवसर हुँदा एमबाप्पेले पेनाल्टी प्रहार गर्न किन दिए मेस्सीलाई?
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मन-पीएसजीले मंगलबार राति क्लब ब्रुज केभीलाई ४-१ गोलले हरायो। घरेलु मैदानमा पीएसजीका दुई स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी र केलियन एमबाप्पेले दुई दुई गोल गरे।
खेलमा एमबाप्पेलाई ह्याट्रिक पूरा गर्ने अवसर थियो तर उनी अघि सरेनन्। पहिलो हाफमा २ गोल गरेका एमबाप्पेका लागि ७६ औँ मिनेटमा पीएसजीले पाएको पेनाल्टी ह्याट्रिक पूरा गर्ने मौका थियो। तर उक्त पेनाल्टी मेस्सीले प्रहार गरे र सजिलै गोल पनि गरे। मेस्सीलाई डीबक्सभित्र लडाएपछि पीएसजीले पेनाल्टी पाएको थियो।
खेलपछि एमबाप्पेले मेस्सीको आत्म विश्वास बढाउन उनलाई पेनाल्टी प्रहार गर्न दिइएको बताएका छन्। ‘ हामीलाई लियोनल मेस्सी आवश्यक छ। सिजनभर उनी चाहिएका छन्। चाहिएको बेला उनले सहयोग गर्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ’, २२ वर्षीय एमबाप्पेले भनेका छन्, ‘ यस्ता खेलहरुमा उनको आत्मविश्वास बढ्नु आवश्यक छ। उनले हाम्रो पनि आत्मविश्वास बढाउने छन्।’
यसअघि च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत आरबी लेइपजिगविरुद्धको खेलमा आफू ह्याट्रिक पूरा गर्ने अवसरमा रहेका बेला मेस्सीले प्राप्त पेनाल्टी एमबाप्पेलाई दिएका थिए। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा प्राप्त उक्त पेनाल्टीमा एमबाप्पे चुकेक थिए।
टोलीका महत्वपूर्ण अर्का खेलाडी नेमार घाइते भएर केहि समयका लागि बाहिरिएपछि पीएसजीमा मेस्सी र एमबाप्पेमाथी जिम्मेवारी बढेको छ।
च्याम्पियन्स लिगमा मेस्सीले यो सिजन पाँच खेलमा पाँच गोल गरेका छन् भने एमबाप्पेले ४ गोल र चार असिस्ट गरेका छन्। मेस्सीले गरेका तीनवटा गोलमा एमबाप्पेको असिस्ट रहेको छ। पीएसजी यो सिजन च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरण पुगिसकेको छ।
यसैगरि घरेलु लिगमा पीएसजी दोस्रो स्थानको रेन्नेसभन्दा ११ अंकले अगाडि रहेको छ। प्रतियोगितामा एमबाप्पेले ७ गोल र ८ असिस्ट गरेका छन् भने मेस्सीले एक गोल र ३ असिस्ट गरेका छन्।